Xubnihii Dawlada Federalka Kaqaybgali lahaa Oo Lago'aamiyay - Cakaara News
Xubnihii Dawlada Federalka Kaqaybgali lahaa Oo Lago'aamiyay
Jigjig(CN) Isniin, 21ka September 2015, Sida caadada u ah ururka yehadhig iyo ururada bahwadaagta la ah ee kuguulaystay doorashadii 5,aad ee 2007TI ayaa dhisa dawlada dhexe. waxayna XDSHSI soo waydiiyeen inay soo gudbiyaan 4 xubnood oo uga qaybgasha hogaaminta dawlada dhexe maadaama oo labadan todobaad ee inagu soo aadan ladhisayo dawlada federalka ah.
Hadaba, Shir mudo 2maalmood ah usocday hogaaminta sare ee XDSHSI iyo gudiga fulinta oo lagaga doodayay xubnihii dawlada federalka uga mid noqon lahaa DDSI 5ta sano ee soo socota ayaa saaka lago'aamiyay.
Shirkan oo lagu qiimeeyay waxqabadkii mas'uuliyiintii hore ayay gudiga fulintu isla qaateen in mas'uuliyiintii 5tii sano ee hore soo ahaa loogu daro 5tan sano ee cusub maadaama oo ay khibrad wanaagsana leeyihiin. waxayna kalayihiin sidan: Cabdifataax Sh/C/laahi, Axmed Shide, Rashiid Xaaji iyo Gabadh lago'aamiyay inay kamid noqoto oo aan magaceeda dib idiinka soo sheegi doono.
Hadaba waxaa codbuuxa lagu go'aamiyay in xubnahan sare kuqoran ay JDFI ee ladhisayo uga mid noqdaan DDSI.Sidaas ayaana loogu gudbiyay ururka yehadhig. Ururkuna si fiican ayuu usoo dhaweeyay una aqbalay go'aanka hogaaminta xisbiga.